Xisbiga Social Demokraterna oo magacaabay gudoomiye cusub | Somaliska
Golaha sare ee xisbiga Social Demokraterna ayaa gudoomiye u doortay ninka lagu magacaabo Stefan Löfven oo ah gudoomiye ururka shaqaalaha IF Metall.
Gudoomiyaha cusub oo war saxaafadeed qabtay ayaa sheegay in Sweden ay u baahantahay siyaasada wanaagsan ee xisbiga Socialka. Ninkaan ayaa lagu amaanaa in uu qeyb weyn ka qaatay dhowrida suuqa shaqada maadaama uu yahay gudoomiyaha ururka shaqaalaha oo ay xubin ka yihiin dadka kor uu dhaafaya 350,000 oo qof.
Dadka yaqaana gudoomiyaha cusub ayaa sheegay in uu yahay nin wanaagsan oo degan oo ku haboon booska gudoomiyaha xisbiga. Hawsha gudoomiyenimada ayuu si ku meel gaar ah u hayn doonaa ilaa 2o13 iyadoo markaas ka dib la filayo in laga dhigo gudoomiye rasmi ah.
Gudoomiyaha cusub ayaan ku jirin baarlamaanka sidaa darteed ayaa qof kale ku matali doonaa xisbiga arimaha baarlamaanka. Waxa uu gudoomiye ka noqday ururka shaqaalaha sanadkii 2001 isagoo sanadkii 2006 ka mid noqday golaha sare ee xisbiga.
Löfsen ayaa badalaya gudoomiyihii dhicisoobay ee Håkan Juholt kaasoo xisbiga u soo hooyay guul daro weyn oo xaga baaritaanada cododka ah iyo fadeexooyin.
January 28, 2012 at 07:15
soo dhawooow gudoomiye waayo waa xisbiga kaliya ee aan taageersa nahay anigu